Arakaraky ny aretina miseho kosa anefa ny vola lany amin’izany ary miovaova, fa tsy “prix fixe” io vola lany io, hoy ny dokotera Fidy Bariniaina ary miakina amin’ny aretina koa izany, hoy hatrany ny nambarany. Araka ny fanazavana voaray, dia nitondra hafatra ho an’ireo olona manao dokotera tena, ity dokotera ity, ka nambarany, fa tsy ampy ny fatra na daozy amin’ny fanafody hohanina, ka lasa tsy mandaitra amin’ny aretina iray intsony ny fanafody, hoy izy, hany ka lasa sarotra tsaboina. Vao mainka mihombo ny aretina, raha sanatria ka manao dokotera tena, hoy hatrany izy. Tsotra ny hafatra nomeny, dia tsy misy afa-tsy ny fanatonana dokotera na toeram-pitsaboana ihany. Nambarany koa, fa misy aretina mitovy ny fisehoany fa ny fitsaboana no samy hafa, ka ilaina ny fanatonana mpitsabo.
Ankoatra izay dia noho ny fiovaovan’ny toetr’andro no mahatonga ny aretina samy hafa, koa rehefa mafana ny andro dia manao akanjo mifanaraka amin’izany ny olona, fa rehefa hariva dia mivadika mangatsiaka, ka tonga ny aretina kohoka, ny aretin-kibo ary ny tazo no betsaka amin’izany. Eo koa ny taovam-pisefoana mihetsika rehefa mangatsiaka. Mila tezaina amin’ny fahadiovana koa ny olona, ka alohan’ny hisakafo dia misasa tanana, ary diovina ny sakafo sy ny voankazo hohanina. Ampangotrahana ihany koa ny rano sotroina. Tokony hadio koa ny trano fonenana, fa tsy atao mando, fa mampikohaka zaza. Eo amin’ny tazo indray, dia idina ny varavarankely, alohan’ny hirehetan’ny jiro. Totofana ny rano miandrona, sorohana ny lobolobo ary mampiasa lay. Ireo no tokony hotandrovin’ny tsirairay, mba hisorohana ny aretina mety ho tonga tampoka, hoy hatrany ny dokotera Fidy. Marihana, fa miezaka ny manome fahafaham-po ho an’ny olona tonga mitsabo tena ao aminy, ny klinika Fidy, hoy izy.